Boris Johnson oo ku guuleystay Raiisal Wasaaraha cusub ee Ingiriiska | Xaysimo
Home War Boris Johnson oo ku guuleystay Raiisal Wasaaraha cusub ee Ingiriiska
Boris Johnson oo ku guuleystay Raiisal Wasaaraha cusub ee Ingiriiska
Xoghayihii Arimaha iDbada Ingiriiska Boris Johnson ayaa ku guulaystay inuu noqdo raysal wasaaraha cusub ee dalkaasi.
Doorashadii ugu dambaysay ee xisbiga Conservatives ku dooranayey hogaankiisa ayuu ka helay Mr Boris Johnson 66% taas oo uu kaga guulaystay murashaxii la tartamayey ee Jeremy Hunt.
Raysal wasaaraha cusub ee dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa markii lagu dhawaaqay natiijada codaynta waxa uu ka hadlay guusha uu gaadhay ee uu hogaanka ugu qabanayo dalka ingiriiska iyo xisbiga Conservatives-ka.
Mr Boris Johnson oo ka dib guusha uu gaadhay la hadlay warbaahinta ayaa sida ay Dailly Mail ku warantay waxa uu balanqaaday inuu sii dardar gelin doono heshiiska UK ay doonayso inay kaga baxdo midawga Yurub, isaga oo sheegay in xisbigiisu doonayo inuu xidhiidh dhaw la yeesho midawga yurub ka dib marka ay dawlada UK gaar u istaagto.
Sidoo raysal wasaaraha cusub ee UK waxa uu balanqaaday in hogaamintiisu ay midayn doonto bulshada ku qaybsantay heshiiska lagaga baxayo midawga yurub.
Dhinaca kale madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa hambalyeeyey raysal wasaaraha cusub ee Ingiriiska Boris Johnson kaas oo uu u sheegay inuu u rajaynayo shaqo wanaagsan.”
Sidoo kale Michel Barnier oo midawga yurub u qaabilsan wada hadalka UK ayaa sheegay inuu doonayo in hab wax dhisaya ula shaqeeyo raysal wasaaraha cusub si heshiiska ka bixitaanka midawga yurub ee UK aanu wax caqabad ah ula kulmin.